Featured Archives - Dainik Headlines
March 31, 2019	Featured 0
संघीय नेपालको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलगत्तै प्राचीन जनकपुर शहरलाई प्रदेश नम्बर २ को छायाँ राजधानीको रूपमा हेरिएको छ । छायाँ यो अर्थमा की यसको अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन । त्यसो त नेपाल प्रहरी र राष्टबैंक सहित विभिन्न सरकारी निकायहरूको जनकपुरमा न प्रदेशको प्रमुख कार्यालय स्थापना भइसकेको छ भने अझै हुने …
January 21, 2019	Featured 0
गायक तथा संगीतकार सविन लिम्बुको आवाजमा रहेको गीत ‘मन मिलेपछी’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।‘पल पलमा’,‘किन रुन्छ मन’,‘म भन्दा नी धेरै राम्री’लगायतका दर्जनौ चर्चीत गीतहरुमा आवाज भरेका लिम्बुको अर्को गीतको म्युजिक भिडियो विहिवार सार्वजनिक भएको हो । सुमधुर आवाजका धनी गायक लिम्बु पछिल्लो समय चर्चामा रहेका गायक हुन् । …
एजेन्सी । महिलाको सबैभन्दा ठूलो सत्रु ‘सौता’लाई मान्ने गरिन्छ । अहिलेसम्म महिलाले जस्तोसुकै हिंसा र पीडा सहेकी छन् । तर सौता सहन नसकेर श्रीमान छाडेका धेरै उदाहरण छन् ।तर, यहाँ एक महिलाले कान्छी ल्याएको भन्दै आफ्नै श्रीमानको रामधुलाई गरेकी छिन् । कानपुरको नौबस्तामा लुकिछिपी दोस्रो विवाह गरेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीसँग …
January 14, 2019	Featured 0
बाटोघाटोमा युवतीले कपाल चिटिक्क पारेर हिंडेको देख्दा जो कसैको पनि मन लोभिन्छ । कपाललाई बिभिन्न डिजाइनमा सजाएर युवतीअरु आकर्षित देखिने गर्छन । तर, फ्लोरिडाकी आसा मन्डेलालाई आफ्नो कपाल लामो भएका कारण हैरानी भएको छ। उनको कपालको लम्बाइ ५५ फिट छ भने तौल २० किलो छ । बाटोघाटोमा हिड्डुल गर्दा उनको …
वार्सा। पोल्याण्डको काक्रो शहरबाट १४ किलोमिटर टाढा एक रहस्यमयी नुन खानी छ । शताब्दीऔं पहिले बनेको यो सबैभन्दा ठूलो खानी हिलेसंसारभरका पर्यटकको लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । काक्रो शहरका नागरिकहरु सयौं पवर्ष पहिलेदेखि यसलाई नुन खानी सम्झिरहेका थिए। यो खानी बन्द भएपछि अहिले यसको तल केही शोधकर्ता पुगेका थिए …
एक सुन्दर जोडि थिए ! केटा र केटि धेरै बर्ष माया प्रेम बसे पछि विवाह गर्छन , विवाह पछि त झन माया प्रेम पनि धेरै बड्दै जान्छ,दुबै जना धेरै नै खुशि र एक सुखि परिवारका साथ रमाउदै जिवन निर्वाह गरि रहेका हुन्छन। बिहान बेलुका श्रीमती पुजा पाठ गर्न गरेर सधै …
संसारका शब्दकोषहरु खोज्दा पनि वर्णन गर्न नसकिने एउटा तस्बिर ! को हुन् ‘आमा’ ?
January 8, 2019	Featured 0
को हुन् ‘आमा’ चिन्ने की ? -शिखरजंग श्रेष्ठ सृष्टीकर्ताको उपमा पाएकी आमा, लाग्छ मेरो लागी उनीजति प्रिय अरु कोहि छैन् । आमाको सम्मानका खातिर दर्जनौ उपमाहरु दिदै पनि आईएको छ । दुई अक्षरले निर्मित आमा शब्दलाई न हामीले हेलामा पार्न सकिन्छ न बिर्सन नै । जति तिरस्कार गर्न खोजेपनि मन …
January 7, 2019	Featured 0
काठमाडौं : दरबारको शान, सौकत र शासन त्यसै दिन ढलेको थियो, जुन दिन कहालीलाग्दो दरबार हत्याकाण्ड भयो । गीत बदलियो, रीत बदलियो । विगत परिमार्जित भएर वर्तमान फरक देखियो । सबै कुरा परिवर्तन नै थियो । हिजोको मामाघर आजको संग्राहलय बन्यो । तर, मन बदलिएन । देश र आमा उस्तै …
बिचित्रको ठाउँ ! जहाँको पानीमा खसेका वस्तु ढुंगा बन्छन्
January 6, 2019	Featured 0
काठमाडौँ । पानीमा खसेको वस्तु ढुँगा हुन्छ भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर इंग्लाण्डको द प्रेट्रिफाइङ वेल यस्तो अनौठो कुवा हो, जुन पानीमा खसेको वस्तु ढुंगामा परिणत हुन्छ। इंग्लाण्डस्थित द प्रेट्रिफाइङ वेलमा खस्ने कुनै पनि वस्तु जस्तैः रुखका पात, काठ, वा जीव खसेको केही दिनपछि ढुंगामा परिणत हुने गर्छ। देवताले …
अनौँठो ठाउँ : जहाँ बिरालोलाई मानिन्छ देवीको रुप, अपमान गरे गाउँ निकाला गरिन्छ
एजेन्सी । हिन्दू धर्मशास्त्रका अनुसार विरालोलाई देख्नु वा बाटो काट्नु अशुभ मानिने गरिन्छ। यति मात्र हैन घरमा बिरालो पटक पटक आउनु पनि अशुभ मानिने गरिन्छ। तर भारतको कर्नाटकमा यस्तो ठाउँ छ जहाँ विरालोलाई शुभ मात्र मानिदैन्, यहाँको एक मन्दिरमा यसलाई देवी मानेर पुजा गर्ने गरिन्छ। यो मन्दिर कर्नाटकको माड्या जिल्लाबाट …